Wel Come to Sunpakuwa SACCOS
सुनपकुवा स्वावलम्बी साकाेसकाे आधिकारिक Website मा यहाँलाइ हार्दिक स्वागत छ ।
श्री सेयर सदस्यज्यू ऋणको किस्ता र व्याज समयमा नै भुक्तानि गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । हजुरले मासिक बचत नियमित जम्मा गर्न भुल्नु त भएको छैन?, नियमित कारोबारका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
मोरङ जिल्लाको तत्कालिन उर्लाबारी गा.वि.स. वडा नं.–६, हाल नगरपालिका वडा नं.–३, मंगलबारे स्थित स्थानिय गैर सरकारी संस्था स्वयम्सेवक समन्वय केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा समाजका अग्रणी व्यक्तित्वहरुको भेलाबाट मिति २०५० साल ज्येष्ठ महिनामा प्रति कित्ता शेयर रु.५०/–मासिक बचत रु. ५०/– र अन्य शुल्क रु. १५/– गरी रु.११५/– जम्मा गरी ४१ जना शेयर सदस्यबाट यो संस्था सुरु गरियो । सुनपकुवा स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तत्कालिन कार्यक्षेत्र उर्लाबारी गा.वि.स. रहेको थियो । तदर्थ समितिका अध्यक्ष लगायत सञ्चालक समितिका साथीहरुको अथक प्रयासबाट २०५०/०७/२५ मा जिल्ला सहकारी कार्यालय मोरङमा दर्ता भएसंगै यो सहकारीको विधिवत् रुपमा जन्म भएको हो । यसको प्रारम्भिक साधारण सभा ४१ जना शेयर सदस्य मध्ये ३४ जनाको उपस्थितिमा श्री सुनपकुवा माध्यमिक विद्यालय उर्लाबारी–२, साविक ७ मंगलबारेमा सम्पन्न गरिएको थियो ।
विनियम अनुसार हाल संस्थाको कार्यक्षेत्र उर्लाबारी नगरपालिका, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नं. १, देखि ७, मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका रहेका छन् । संस्थाले २०५० सालदेखि २०६६ सालसम्म विभिन्न स्थानिय शेयर सदस्यहरुका घरमा See more
परिकल्पना : “गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदायक, सक्षम दिगो सहकारी”
अनिवार्य बचत मासिक
बाल बचत seemore..…….
बचत सुरक्षण ऋण
कम्प्युटर ऋण seemore……….
सौर्य उर्जा (उज्यालो सुनपकुवा कार्यक्रम)
सदस्यता विस्तार कार्यक्रम
ध्येय : सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुरुप आधुनिक प्रविधियुक्त सर्वसुलभ वित्तीय र गैर वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्ने ।
आदरणीय सञ्चालक समिति पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरु, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरु, सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका सदस्यहरू, सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरू एवम् ज्येष्ठ बचतकर्ता बुबा–आमा, बालबचतकर्ता भाई बहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, छाता संघहरु तथा शुभेच्छुक र शुभचिन्तक महानुभावहरू सबैमा संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिकताका साथ सहकारी अभिवादन ।
सुनपकुवा स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. २०५० सालमा जिल्ला सहकारी संघ मोरङमा विधिवत दर्ता भई सञ्चालनमा आएको संस्था हो । दर्ताको समयमा झोला तथा सानो दराजमा सीमित रहेको र सीमित शेयर सदस्यमा कारोबार हुँदै आएको ऐतिहासिक कागजातमा हेर्न पाइन्छ । सहकारीप्रतिको खोज तथा विकासक्रमसँग सहकारीको मूल मर्म खुला सदस्यताको धारणा विकास भएको हो । सदस्यहरुको वृद्धिसँगै संस्थालाई व्यवस्थित seemore………
शेयर सदस्यहरुको नजरमा सुनपकुवा साकोस
लेखबहादुर धिमाल (व्यापारी)
सुनपकुवा स्वावलम्बी साकोस १ नं. रोजाइको संस्था हो । यहाँ ऋण लगानी तथा असुली प्रक्रिया अत्यन्तै सजिलो रहेको छ । यसको अन्य वित्तीय संस्थाहरु भन्दा ऋणमा व्याज न्यून रहेको छ । हामी जस्ता स्थानीय व्यवसायीहरुले ऋणको लागि अन्य कुनै seemore………….
एकीकृत साधारण सभा
सुनपकुवा स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र सिर्जना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बीचको एकीकरणका लागि मिति २०७७ साल माघ १० गते शनिबारका दिन संयुक्त एकीकरण कार्यदलका संयोजक केदारनाथ खतिवडाको अध्यक्षतामा ड्रिम्स होटल, उर्लाबारी–३, किसानचौकको सभाहलमा एकीकृत साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव श्री रविन भट्टराईले गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लि. मोरङका अध्यक्ष सोमनाथ निरौला रहनुभएको थियो भने अतिथिहरुमा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लि. मोरङका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रकाश कोइराला, उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं.–३ का अध्यक्ष गन्जबहादुर कार्की, वडा नं.–४ का अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण धिमाल, १ नं. वडा सदस्य मोहनकर्ण श्रेष्ठ, ४ नं. वडा सदस्यहरु कृष्णमाया कडरिया कार्की र अमृता दास रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा सिर्जना साकोसका कोषाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद खतिवडाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो । प्रमुख अतिथिबाट पानसमा दिप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा एकीकरण संयुक्त कार्यदलका संयोजक केदारनाथ खतिवडाले दुवै संस्था स्थापनाका पृष्ठभूमि सम्बन्धी आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो भने सुनपकुवा स्वावलम्बी साकोसका अध्यक्ष तथा सम्पत्ति मूल्याङ्कन समितिका संयोजक पदम सापकोटाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा एकीकृत वासलात प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सिर्जना साकोसका अध्यक्ष डिल्लीराम सापकोटाले संस्था एकीकरण पहल र कार्य प्रगतिका विषयमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो । सुनपकुवा स्वावलम्बी साकोसका प्रमुख सल्लाहकार रामप्रसाद गौतमले एकीकृत संस्थाको तदर्थ समिति घोषणा गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सोमनाथ निरौलाले तदर्थ समितिलाई सपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । तदर्थ समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम सापकोटाको प्रतिवद्धता मन्तव्य, अतिथि तथा प्रमुख अतिथिको शुभकामना मन्तव्य सहित सभाध्यक्षले कार्यक्रमको औपचारिक समापन गर्नुभएको थियो ।
सुनपकुवा न्यानो कार्यक्रम
यस सुनपकुवा स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आ.व. २०७६/०७७को वार्षिक कार्ययोजना अनुसार उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं.–१, २ र ३ का ६ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्यानो कपडा वितरण सम्पन भएको छ । संस्थाले प्रत्येक विद्यालयका २०/२० जना विपन्न विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा (स्वेटर) वितरण गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु श्री सुनपकुवा मा.वि., श्री दुर्गा मा.वि., श्री सुनझोडा मा.वि., श्री सरस्वती आ.वि., श्री लक्ष्मी आ.वि. र श्री शान्ति आ.वि. का विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरु छनौट गरी न्यानो स्वेटर वितरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सुनपकुवा माध्यमिक विद्यालयमा संस्थाको तर्फबाट सामाजिक सम्बन्ध उपसमिति संयोजक श्री नारदप्रसाद सुवेदी, सञ्चालक सदस्यद्वय श्री यमुना न्यौपाने, श्री ज्योति थापा र व्यवस्थापक श्री राजकुमार बरालको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा संस्थाका उपाध्यक्ष श्री हेमचन्द्र थापा र कर्मचारी विवेक खतिवडाको सहाभागिता रहेको थियो । सोही दिन सम्पन्न कार्यक्रममा श्री शान्ति आधारभूत विद्यालयमा संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार श्री रामप्रसाद गौतम, श्री सुनझोडामा माध्यमिक विद्यालयमा संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री राजेन्द्र आचार्य, श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा संस्थाका सल्लाहकार श्री विश्वनाथ ढुंगाना, सञ्चालक सदस्य श्री ज्योति थापा र व्यवस्थापक, श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालयमा संस्थाका व्यवस्थापक र बरिष्ठ सहायक कमलप्रसाद हुमागाई सहभागी रहनुभएको थियो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमले कठाङिग्रएको चिसो मौषममा विपन्न विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठन गर्न सहयोग पु¥याएको छ । सो कार्यक्रमबाट १२० घर लाभान्वित भएका छन् ।
२७औं स्थापना दिवस २०७६
सुनपकुवा स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको २७औँ संस्था स्थापना दिवसको औपचारिक कार्यक्रम २०७६ कार्तिक २५ गते उर्लाबारी–३, मंगलबारे स्थित रिमिझिम पार्टी प्यालेसको सभाहलमा संस्थाका अध्यक्ष श्री पदम सापकोटा ज्यूको सभापतित्वमा प्रमुख अतिथि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कुन) का कोषाध्यक्ष श्री केशवप्रसाद पोख्रेल ज्यूबाट उद्घाटन गरि सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव श्री रविन भट्टराई ज्यूले गर्नुभएको थियो भने विशिष्ट अतिथिमा नेफ्स्कुनका सञ्चालक गोमा नेपाल, अतिथिहरुमा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ मोरङका उपाध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश कोइराला, संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार श्री रामप्रसाद गौतम, लगायत सिर्जना साकोस,हाम्रो साकोस, गणपति कृषि सहकारी संस्था, ज्येष्ठ नागरिक एकता समन्वय केन्द्र, लगायत विभिन्न विद्यालय, संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष श्री हेमचन्द्र थापाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
उक्त अवसरमा उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं.–१, २ र ३ का ८ वटा विद्यालयहरुबीच नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न भयो उक्त प्रतियोगितामा विद्याज्योति बोर्डिङ्ग स्कुल प्रथम, ब्रिलियन्ट बोर्डिङ्ग स्कुल द्वितीय र सनसाइन बोर्डिङ्ग स्कुल तृतीय भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा आ.व. २०७५/०७६ मा संस्थागत कारोबारमा उत्कृष्ट दैनिक बचत, ज्येष्ठ बचत, बाल बचत, कारोबार बचत, उत्कृष्ट ऋण कारोबार पुरस्कार, सदस्य विस्तार योगदान पुरस्कार, एकल महिला सम्मान, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, उत्कृष्ट उद्यमी, असल ऋणी ग्रिनकार्ड वितरण, उत्कृष्ट विद्यार्थी र उत्कृष्ट कर्मचारी तथा नृत्य प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कृत एव् सम्मान गरिएको थियो । संस्थाका अध्यक्षद्वारा कार्यक्रम सफल बनाउन नेफ्स्कुनबाट पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा विभिन्न संघ/संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरी पाल्नुहने अतिथिहरु र सहभागी सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरुलाई कार्यक्रम सभ्य तथा भव्य रुपमा सम्पन्न गर्र्नु सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो साथै सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चालक, शेयर सदस्य, साउण्ड सिष्टम व्यवस्थापन टोली, कर्मचारी लगायत संस्थाका शुभचिन्तक तथा शुभेच्छुकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन तथा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुने शेयर सदस्य, बाल सदस्य तथा विद्यार्थीहरुलाई बधाई दिँदैै कार्यक्रमको औपचारिक समापनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
एक दिवशीय वाल अवलोकन भ्रमण सम्पन्न
बाल सदस्यहरुसँगको दिगो सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि आ.व. २०७५÷०७६ को कार्ययोजना अनुसार एक दिवशीय वाल अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गरिएको छ । संस्थाको भवनबाट विहान १० वजे भ्रमण टोली भेला भई मदन स्मृति संग्राहलयतर्फSee more
सुनपकुवा स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
उर्लाबारी–३, मङ्लबारे, मोरङका शेयर सदस्य श्री उदयचन्द्र श्रेष्ठ
वि.सं. २०६१ साल भाद्र १६ गते मंगलबारको दिन वैदेशिक रोजगारमा इराक जानका लागि भनेर पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङबाट काठमाण्डौँ पुगेका थिए सुनपकुवाका सदस्यता नं. १००३ का सदस्य श्री उदय चन्द्र श्रेष्ठ । २ लाख ५० हजार रुपैया म्यानपावरलाई बुझाएर इराक जान ठिक्क थिए । बानेश्वर स्थित एक होटलमा साथीहरुसहित उनलाई म्यानपावरले राखेको थियो । म्यानपावरमा पासपोर्ट लिएर बुधबार इराकतर्फ उड्ने तयारी थियो । तर इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि उनको योजना सपनामा सीमित भयो ।
दर्जन नेपालीको हत्याको विरोधमा उदय उड्नुपर्ने दिन काठमाण्डौ तनावग्रस्त बन्यो । उनी पासपोर्ट लिन म्यानपावर पुग्दा कार्यालय जलाइसकेको थियो । त्यो आगोको लप्टामा प¥यो उनको पासपोर्ट पनि । युवाहरु विदेशिने समय थियो उनले सम्झिए मलाइृ पनि विदेश जाने भूत सवार थियो । चुनौती लिएर धेरै पैसा खर्च गरेर इराक जाने अनि झ्याप्पै पैसा कमाउने सपना देखेको थिए ।
युद्ध ग्रस्थ इराकबाट मोटो रकम कमाउने उनको सपना नेपालीको हत्यासँगै भएको तोडफोडले तुहाइदियो । बुबाले ऋण खोजेर जुटाईदिएको पैसा फिर्ता आउने कुनै सम्भावनानै भएन । त्यसवेला उनी २० वर्षका थिए । पैसा कमाएर घरजम गरी जीवन विताउने सपना बोकेर विदेशिने योजनामा थिए । न त इराक उड्नै पाए न त पासपोर्ट र बुबाको २ लाख ५० हजार नै हात लाग्यो । उनी घर फर्किन सकेनन् । उनका भाइ आशिष उर्लाबारी–३ स्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा कृषि पढिरहेका थिए । उनी त्यही पुगे ।
आशिषले च्याउमा ट्रेनिङ लिइरहेका थिए । उदयले कृषिका विद्यार्थी रहेका भाइसँगै बसेर कृषि क्षेत्रमा लाग्ने अठोट गरे । थोरै जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका भाइ पढाइ सकेपछि इजरायल गए । उदयले कृषिमै भविष्य खोज्न थाले । भाइले लिएको त्यही जग्गामा तरकारी लगाए तर सफल भएनन् । त्यही बेला विवाह भयो । आर्थिक अभाव, भाडाको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । जीवन कष्टप्रद बन्यो । चिनेको कोही थिएन । घर, घडेरी, बस्ने केही थिएन । तरकारी खेती मात्रै गर्थे । एक टुक्रो भाडाको जीवन थियो, उनले सम्झिए ।
सुनपकुवा सहकारी तथा समूहको ऋण पाएपछि उनको हिम्मत बढ्यो । खेतीका लागि थप जग्गा भाडामा पाए । तरकारी खेती खर बाख्रा पालनमा घाटा मात्रै बेहोरे । अनि च्याउमा लागे । छोरा विनयको नाममा पूर्वकै पहिलो च्याउ उद्योग खोले च्याउ उद्योग दर्ता गर्ने क्रममा विराटनगरको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारीले आश्चर्य जनाएका थिए । त्यसैले विनय च्याउ उद्योग दर्ता गर्न मिहिनेत नै गर्नुप¥यो ।
च्याउ उत्पादन भयो तर बजार पाएन । दश वर्ष अघिसम्मको अवस्थाबारे उदयले सुनाए, च्याउ खाने कमै हुन्थे । च्याउ किनेर खानुपर्छ भन्ने बानी नै थिएन । सुरुवाती चरणमै उनले दैनिक ५०–६० केजी च्याउ उत्पादन गर्थे । तर विक्री भएन । धरानसम्म लगेर पनि च्याउ फर्काउनुपर्दा उनी निराश हुन्थे । च्याउ कुहिन्थ्यो । त्यही बेला च्याउमा हरियो ढुसीलाग्न थाल्यो । च्याउ उत्पादनका लागि बनाएका पोकाहरु काम नलाग्ने भए । च्याउले बजार नपाइरहेको अवस्थामा पोकामै लागेको ढुसीले उद्योगनै संकटमा पा¥यो । ऋणले थिच्दै गयो, उक्सनै गाह्रो हुनेगरी ।
संकटको घडीमा उदयको एक भारतीय विज्ञसँग चिनजान भयो । ती विज्ञले च्याउमा प्रयोग हुने चुना र पराल धुनुपर्ने लगायतका प्राविधिक कमजोरी बताइदिए । उनले केही महिना भारतको सिलीगडीमा गएर च्याउ उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक तरिका सिके । त्यही विधि आफ््नो उद्योगमा सुरु गरे । ढुसी लाग्न छाड्यो । उत्पादन बढ्न थाल्यो । उनले बल्ल चौथो वर्षमा आएर २५ हजार, ५० हजार गर्दै सुरुमा लिएको ऋण तिरे र लगानी बढाए । व्यापार पनि बढ्दै गयो । यसरी १२ वर्ष मिहिनेत गरेपछि उनी प्रदेश नं.–१ कै सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने च्याउ कृषक बनेको छन् । देशमै पहिलो पटक च्याउ फेष्टिबल गरेका उनले राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार लगायत थुप्रै सम्मान पाइसकेका छन् ।
उदयले आफ्नो व्यवसायलाई किसानचौकमा विस्तार गरेका छन् । साढे चार विगाहमा एकसय वटा टहरामा विनय च्याउ उद्योगले च्याउ उत्पादन गरिरहेको छ । जहाँ ४७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । दैनिक ६ सयदेखि ८ सय केजीसम्म च्याउ उत्पादन हुन्छ । उदयले च्याउ खेतीबारे तालिम पनि दिइरहेका छन् । आफ्नो व्यवसायिक सफलताबारे ३६ वर्षीय उदयले भने अहिले व्यवसाय कत्रो भयो कति सम्पत्ति भयो त्यसको लेखाजोखा नै गर्न भ्याएको छैन ।
बीउको एउटा राम्रो पोकाबाट ३ केजीसम्म च्याउ फल्ने उनी बताउँछन् । च्याउमा हावापानीको प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । च्याउका लागि चैत्र वैशाखमा अफ सिजन हो तर कहिलेकाँही यहि सिजनमा च्याउ धेरै फल्छ । उनी भन्छन भुसुना र हरियो ढुसीले च्याउ सखाप पार्ने भएकोले परालमा गुणस्तरीय चुना प्रयोग गर्नुपर्छ । यहाँ सस्तो मूल्यका कारण उच्च माग भएकोले कन्या च्याउको उत्पादन बढी हुन्छ । बलौटे माटोमा उमारिने मिल्की ह्वाइट एक सिजन मात्रै उत्पादन हुन्छ । कालो च्याउ पनि लगाउन थालिएको छ ।
उदयका अनुसार अचेल धेरैले च्याउ खान थालेको छन् । बजार बढेको छ । च्याउको सुकुटी, अचार, मःम, पकौडा लगायत विभिन्न परिका रेष्टुरामा थपिएसँगै बजार बढिरहेको छ । १० वर्ष अघि थोरै च्याउ बेच्न पनि गाह्रो पथ्र्याे । अहिले जति पनि बिक्छ उनी अनुभव सुनाउँछन्, च्याउको गुणात्मक उत्पादनसँगै सयौँले रोजगारी पाएका छन् । यसले युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रेरित गर्छ । च्याउ कृषकलाई अहिले बजारको कुनै समस्या नभएको उनी बताउँछन् ।
उनले उर्लाबारीमै एग्रो मार्ट पनि सञ्चालन गरेको छन् । जहाँ पूर्वी पहाडी जिल्लाका कृषिजन्य उत्पादनहरुलाई बजारीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । उनी गुन्द्रुक, सिन्की, भेडाको घिउ, भीरमौरीको मह, अकबरे र जिरे खुर्सानी, जडीबुटी लगायतका स्थानिय उत्पादनलाई पनि ब्राण्डिङ्ग गर्ने अभियानमा लागेका छन् ।
विहान ४ बजेदेखि खट्छन् । च्याउ टिपेर ६ बजेसम्म आफ्नै गाडीबाट बजारसम्म पु¥याइसक्छन् । खेतीका लागि आफैँले ट्याक्टर किनेका छन् । त्यो सबै विहान ४ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्मको खटाइले सम्भव भएको हो र बारम्बार घाटा लाग्दा विदेश जान नचाहेका होइनन् । पासपोर्ट बनाउन घर जानुपथ्र्याे । बुबाको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा उनले घर फर्कने आँट गरेनन् र आजसम्म इराक काण्डपछि पासपोर्ट पनि बनाएका छैनन् । सुनपकुवा सहकारी संस्थाको साथ सहयोगले आज यो स्थानमा आउन सफल भएको उदयको भनाई छ । सम्पूर्ण युवाहरुलाई सहकारी मार्फत उद्यमशील बन्न आव्हान गर्दछन् ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन),काठमाण्डौं
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि., मोरङ वेलबारी–३
जिल्ला सहकारी संघ लि., मोरङ विराटनगर
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. काठमाण्डौं
फस्र्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेण्ट बैंक लि., काठमाण्डौ
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी क्षेत्रीय रक्त संचार सेवा–विराटनगर
पपुलर इनर्जी सौर्य उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र–काठमाण्डौं
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त संचार सेवा–सुनसरी
विभिन्न मोटरसाइकल कम्पनी तथा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी
आई.एम.ई, प्रभु, हिमाल र मनीग्राम रेमिटान्स सेवा कम्पनीहरु
प्रदेश सरकार भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. १
नगरपालिकाको कार्यालय, उर्लाबारी, मोरङ
वेतेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, उर्लाबारी–२, मोरङ
सालबारी साुमदायिक वन उपभोक्ता समूह–उर्लाबारी–२ र ३, मोरङ
सुनझोडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह–उर्लाबारी–२, मोरङ
सुनपकुवा मा.वि., उर्लाबारी–२, मोरङ
स्वयम्सेवक समन्वय केन्द्र, उर्लाबारी–३, मोरङ
सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, उर्लाबारी–२
मंगलबारे अस्पताल, उर्लाबारी–३
Male Member 41%
Female member 59%
सुनपकुवा स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को Website Visit गर्नुभएकोमा धन्यवाद ।